8 Waxyaalaha Muhiimka ah ee Kooraska Shahaadada ee ITIL - Iskuulka ITS Tech
8 Waxyaabaha Muhiimka ah ee Aad U Baahan Tahay Shahaadada Shahaadada ee ITIL
Mashruuca ITIL (Library Information Infrastructure Library) waa shuruuf ku habboon Maamulka Adeegga IT. ITIL waxay u hoggaansamaysaa ururada IT si ay u ilaaliyaan adeegyadooda dhinaca tayada leh waxayna ku hayaan kuwa ilaaliya si ay u taageeri karaan adduunka dagaalyahanka ah. Nidaamkan, dib loo soo bandhigo 2011, wuxuu ku lug leeyahay hababka la aqbalay ee IT-ga.
ITIL waxay joogtay tan iyo 1980, iyo in ka badan ururada 10,000 waxay raacaan adeegga ITIL adeegga si loo xoojiyo fulinta macaamilka. Shahaadada ITIL waa daruuri lagama maarmaan ah in la kormeero nidaamka shaqada IT. Ka hor intaadan u guurin iyo koorsada ITIL ama xaqiijin, waa inaad ogtahay waxyaabaha hoose ee ku saabsan ITIL:
1. ITIL loogu talagalay qaabeynta goolasha:
IT waa warshad adeeg iyo maareynta adeegga waa mid muhiim u ah horumarkiisa. ITIL waxay dhajisaa nidaamyada la aqbalay ee horumarinta iyo fulinta maamulka adeegga IT. Ka dib markii ITIL ay keento ururrada IT-da ee kharashka yareynta, horumarinta kobcinta, iyo boobka. Ganacsiga ururrada IT-ga ayaa leh aqoon iyo karti. Marka laga hadlaayo marka ururka IT si joogto ah u qaato shuruucda ITIL, waxaay hagaajin kartaa ujeedooyinka iyo sidii ay u fulin lahaayeen habdhaqan wanaagsan.
2. Koorsada ITIL:
Koorsada ITIL waxaa ka mid ah qaybaha hoose:
Qorsheynta Hirgelinta Maareynta Adeegga
Maareynta Kaabayaasha ICT
Barnaamijka Maareynta Hantida
Hirgelinta Yar ee Miisaanka
Miisaaniyadani waxay daboolayaan qayb kasta oo ka mid ah maareynta adeegga in ururka IT-gu uu qaato ka dib si loo hubiyo adeegyo ka fiican.
3. Kala-duwanaanta koorsada ITIL:
Intaad qorsheyneyso inaad qaadato imtixaanka ITIL, waxaad bedeli kartaa koorsadaada sida ku cad shuruudahaaga iyo iswaafajinta. Qaybtaada kuma jiri karto maareynta amniga si aad uga badbaado kooraskaas.
4. Maya khidmadda xubinimada:
Wixii ITIL, waxaa jira sabab aan ku xirneyn si aad u hesho guddi maamul oo kasta oo ah wakiilada. Waxaad si xor ah u qaadan kartaa koorsada ITIL ama Shahaadada ITIL iyada oo aanad qaybin qaybta ama kharashka isqorista ee urur kasta.
5. ITIL waa qalab-madaxbannaan:
ITIL waa bilaash qalab kasta; wuxuu bixiyay in ay tahay in la fuliyo heerka aasaasiga ah ee ururka yar yar. Kadibna, wuxuu qiimeeyaa qiimaha qalabka adiga. Iyadoo warshadaha, waxaad la tacaali kartaa mid kasta oo ka mid ah xogtaada. Haddii aad tahay urur aad u ballaadhan, waxaad u baahan kartaa qalab yar.
6. Heerarka Aqoonsiga ITIL:
Heerka aasaasiga ah wuxuu ku siinayaa fahamka ereyada aasaasiga ah iyo wuxuu leeyahay barasho muhiim ah. Waa inaad u fariisataa ITIL Foundation Imtixaanka shahaadada.
Heerka xirfadeed wuxuu ku siinayaa fahan macquul ah muuqaalka ITIL dhabta ah. Heerka Dhaqtarka ayaa ah xaddiga ugu badan isticmaalka.
Heerka Maamulka wuxuu ku siinayaa aqoon u leh xirfadlayaasha. Tani waa kuwa, kuwaas oo kormeeraya maamulka adeegga ITIL.
7. ITIL ma aha mid la mid ah Maareynta Mashruuca
Isku day inaadan khalad ku dhicin maamulka ITIL. ITIL waxay ka muhiimsan tahay bixinta si siman ee hawlaha shaqo-u-cusbooneysiinta adeegyada dhammaadka.
8. Mudada imtixaanka
Imtixaanka ITIL waa naqshad go'aan oo kala duwan oo aad u baahan tahay inaad ku dhammeysato imtixaanka saacad saacad ah. Waa inaad dhammeysataa 40 wax-qabadyada kala duwan ee wakhtigaas.
Guud ahaan ITIL waxay xoogga saartaa nidaamka adeegga, qorsheynta, isbeddelka, Hawlgalka, iyo Hagaajinta Adeegyada Soodhada. Waxay ku daraysaa jajab kala duwan sida Cilmi-aqoonta, Maaraynta Isbeddelka, Maareynta Xukunka, Maaraynta Dhacdada, Maaraynta Maareynta, Maaraynta Dhibaatada, Maaraynta Heerka Adeegga iyo weliba si ka badan. Mid kasta oo ka mid ah hannaanadani waxay abaabulaan qaabdhismeedka shaqo ee ururka IT si loo helo adeegyo wanaagsan. Koorsada ITIL ama Shahaadada ITIL waxay awood u siineysaa inaad fahamto oo aad u fuliso dhaqamada si habboon.
Sidoo kale waad soo bixi kartaa: - Waa maxay shahaadada ITIL? Yaa ka faa'iideysan doona shahaadada ITIL®?
ITIL waa mid aad u macquul ah isticmaalka. Ururkaagu uma baahna isticmaalka habsocodka oo dhan. Waad ku dhejin kartaa marxaladaha marxaladda dhammaatay. ITIL waa habka ugu habboon ee hababka ugu fiican iyo hababka ugu fiican ee kugu xoojiya inaad bixiso adeegyo dagaal badan oo kharashka diiradda saaraya. Waa qaab ah in la qaato kaddib marka la xayiray adeegga IT-ga. Maxaa badan, qof kasta wuxuu u baahan yahay taas (iyo kadib, waxay u baahan yihiin.)
Mustaqbalka Oracle E-Business Suite iyo Cusbooneysiinta waaweyn ee Sannadaha soo socda